On avr 7, 2019 10 131
Tonga eto Madagasikara nanomboka ny voalohan’ny volana Aprily ka hatramin’ny 6 Aprily 2019, ny delegasiona avy amin’ny famantsiam-bola “ZONTA INTERNATIONAL”. Nahitana ny Judy Kautz , Tamara Hagen ,Ute Scholz, Sadako Miyake ary ny avy amin’ny Unicef avy any Etazonia : Toni Ko,Danielle Boutros,Jhon McNear,Rachel Steinberg,Emily Brouwer,Justin Hemenway.
Nisy fitsidihan’ireto delegasiona ireto ny tany amin’ny faritra Anosy ( Taolagnaro,Amboasary,Berano, Tanandava), toerana nanaovana ny tetikasa samihafa, miompana amin’ny vehivavy sy ny ankizivavy ary vatsian’ny Zonta international sy ny Unicef vola , anisan’izany ny tetik’asa Let us Learn .
Nisy koa ny fitsidihana ny tetikasa novatsian’ny Unicef vola, toy sekoly sy ny toeram-pidiovana. Nisy ny fihaonana sy fifanakalozan-kevitra tamin’ny ankizy sy ny Ray aman-dreny ary ny mpampianatra nandritra ny fitsidihana.
Ny Zonta international dia miaro ny zon’ny olombelona, mikarakara ny vehivavy sy ny ankizy vavy. Tanjona ny hanatsara ny zon’ny vehivavy sy ny ankizy ,amin’ny alalan’ny tetikasa izay atolotra ho azy ireo. Mba afahana manome ny fanampiana amin’ny tetikasa, misy famoriam-bola izay ataon’ny mpikambana miisa 13000 maneran-tany ao anatin’ity ZONTA ity.
Ny vola voaangona dia entina miasa amin’ny toerana sy sehatra samihaa maneran-tany. tsy mandeha irery anefa izany fa misy koa ny fiara-miasa amin’ny fitondram-pankana mba hanatsarana ny fampiharana ny zon’ny vehivavy sy ny ankizy vavy. Ny Zonta International dia miara-miasa koa amin’ny UNICEF, nanomboka ny taona 1972 izay.
Ny taona 2016 no nanomboka ny tetik’asa “NDAHO ISIKA HIANATRA” teto Madagascar. Nilaza ho afa-po tamin’ny fiaraha-miasa ny mpamatsy vola nandritra ny fitsidiahana.
Nilaza ny mbola vonona hanampy ny tetikasa momba ny vehivavy sy ny ankizy vavy eto Madagasikara. ZONTA INTERNATIONAL hoan’ny tetik’asa 2018-2020.